काठमाडौँ । आज (आइतबार) अमेरिकी डलरलगायत अन्य केही देशको विनिमयदर स्थिर छ। आज नेपाल राष्ट्र बैँकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११९ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर १२० रुपैयाँ ४७ पैसा तोकेको छ। &nb...
उद्योगहरुलाई सहयोग पुग्नेगरि सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ : उपाध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । सरकारले लकडाउनका कारण समस्यामा परेका उद्योगहरुलाई बुस्टअप गर्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताउनुभएको छ। उपाध्यक्ष ढकालले मध्यकालिन र दिर्घकालिन योजना स...
घट्यो अमेरिकी डलरसहित केही देशको विनियमदर, कुन देशको कति ?
काठमाडौँ । आज शनिबार अमेरिकी डलरलगायत अन्य केही देशको विनिमयदर घटेको छ। आज नेपाल राष्ट्र बैँकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११९ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर १२० रुपैयाँ ४७ पैसा तोकेको छ। ...
अहिलेको स्थितिमा नयाँ योजनालाई बजेट छुट्याउन सकिदैन : गभर्नर अधिकारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिलेको परिस्थितिमा नयाँ योजनालाई बजेट छुट्याउन नसकिने बताएको छ। हिजोका योजनाहरु अगाडी बढाउन अहिलेको स्रोत र सीमाहरु अर्याप्त रहेकाले नयाँ योजनकालागि बजेट छुट्याउन सक्ने अ...
आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई कोरोनाले नराम्ररी असर पारेपछि त्यसको पुनः उत्थानका उपायको खोजी शुरु भएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज) ले कोरोनाले संसारभर नै...
कोरोना कहर: आर्थिक वृद्धिदर घट्दा प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३४ डलरले बढ्यो
काठमाडाैं । विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ । नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सामान्य अवस्था रहेको भए कूल आर्थिक वृद्धिदर...
यूके पाउण्डको मूल्य बढ्यो, अमेरिकी डलरको घट्यो, कुन देशको कति ?
काठमाडौँ । आज बुधबार अमेरिकी डलरलगायत अन्य केही देशको विनिमयदर घटेको छ भने केहीको बढेको छ। आज नेपाल राष्ट्र बैँकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर १२१ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर १२२ रुपैयाँ २१ पैसा तोकेको छ।...
केन्द्रीय बैंकले कोभिड–१९ बाट ऋणीमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न ब्याजदरमा दुई प्रतिशत छुट दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज एक सूचना जारी गर्दै कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसा...
युरोपेली सङ्घद्वारा १० अर्ब सहयोग
काठमाडाैं । युरोपेली सङ्घले नेपाल सरकारलाई रु नौ अर्ब ८० करोड उपलब्ध गराउने भएको छ । कोभिड–१९ को महामारीविरुद्ध जुध्न तथा त्यसको प्रभाव घटाउन सङ्घले नेपाललाई उक्त रकम प्रदान गर्न लागेको हो । यह...
आज यूरो र पाउण्डको मूल्य बढ्यो, डलरको स्थिर, कुन देशको कति ?
काठमाडौँ । आज मंगलबार अमेरिकी डलरलगायत अन्य केही देशको विनिमयदर बढेको छ भने केहीको घटेको छ। आज नेपाल राष्ट्र बैँकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर १२२ रुपैयाँ ३ पैसा र बिक्रीदर १२२ रुपै...